မြန်မာ လော့ခ်အင် မန်ဘာ လျှောက်ရန်
ပြောင်းရန် Check the turnover amount
Roulette ရိုးလက်၊(36)ကွက်(သို့မဟုတ်)ရွှေဘောလုံးဂိမ်းသည် ရှေးခေတ်ကတည်းကပြင်သစ်နိုင်ငံမှဆင်းတက်လာပါတယ်။ကစားနည်းမှာ နံပါတ်0-36 ထိ၊ အနီကွက် 18ကွက် ("စုံ"ဂဏန်း)၊ အမဲကွက် 18ကွက်("မ"ဂဏန်း)နှင့် အစိမ်းကွက် (နံပါတ်"0") အားလုံးပေါင်း 37ကွက် ရှိပါတယ်။
ရိုးလက်ကစားနည်း ဂိမ်းအသစ်စတိုင်း တိုကင်ပြားရွေးပြီး လောင်းကြေးထည့်ကစားနိုင်ပါတယ်။သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကုန်သွားပါက တိုင်မယ်သည် (36)ကွက်စက်ဝိုင်းကို ဘယ်ဘက်မှစလှည်ပြီး ရွှေဘောလုံးကို ညာဘက်လှည်အောင်ပစ်ထည့်ပါတယ်။ဘောလုံးရပ်သွားမှ ရလဒ်သိနိုင်ပါမယ်။
1. (STRAIGHT UP)
(36)ကွက်စက်ဝိုင်းမှာ အကွက်ပေါင်း 37ကွက်ရှိပြီး၊ နံပါတ် 0-36 ထိ ရှိသောကြောင့် ကြိုက်တဲ့တစ်လုံးဒဲ့ရွေးပြီး ပေါက်ပါက လောင်းကြေး၏ 36ဆရပါမယ်။
ကြိုက်တဲ့ 2လုံးတွဲကပ်လျက် နံပါတ်တိုင်း (ဥပမာ 4,5 (သို့) 17,18) လောင်းကြေးထည့်ပါက ပေါက်လျှင်လောင်းကြေးရဲ့ 18ဆ ရပါမယ်။
ကြိုက်တဲ့ 3လုံးတွဲကပ်လျက်နံပါတ်တိုင်း (ဥပမာ 0,1,2 (သို့) 0,2,3(သို့) 10,11,12) လောင်းကြေးထည့်ပါက ပေါက်လျှင်လောင်းကြေးရဲ့ 18ဆ ရပါမယ်။
4. (SQUARE) သုံညမပါ
ကြိုက်တဲ့ 4လုံးတွဲကပ်လျက်နံပါတ်တိုင်း (ဥပမာ 10,11,13,14(သို့) 20,21,23,24) "နံပါတ်0မပါ" လောင်းကြေးထည့်ပါက ပေါက်လျှင်လောင်းကြေးရဲ့ 9ဆ ရပါမယ်။
ကြိုက်တဲ့ 6လုံးတွဲကပ်လျက်နံပါတ်တိုင်း (ဥပမာ 4,5,6,7,8,9 (သို့) 13,14,15,16,17,18)"နံပါတ်0မပါ" လောင်းကြေးထည့်ပါက ပေါက်လျှင်လောင်းကြေးရဲ့ 6ဆ ရပါမယ်။
ကြိုက်တဲ့ 4လုံးတွဲကပ်လျက်နံပါတ်တိုင်း (ဥပမာ 0,1,2,3 ) လောင်းကြေးထည့်ပါက ပေါက်လျှင်လောင်းကြေး၏ 9ဆ ရပါမယ်။
ရိုးလက်ရဲ့ ဒါဇင်ကွက်မှာ 1st 12 , 2nd 12 , 3rd 12ဟူပြီး(3)ကွက်ရှိပါသည်။1st 12 အကွက်မှာနံပါတ် 1မှ12ထိ၊ 2nd 12အကွက်မှာနံပါတ် 13မှ 24ထိနှင့် 3rdအကွက်မှာနံပါတ် 25မှ36ထိဖြစ်ပါသည်။သို့သော်ပေါက်သည့်နံပါတ် "0" ဖြစ်ပါက တိုင်ဘက်နိုင်ပါမည်။လောင်းကြေးထည့်ထားသည့်အကွက်ထဲနံပါတ်ပေါက်ပါကလောင်းကြေး၏ 2ဆ ရပါမည်။
ရိုးလက်၏ Columnလိုင်း 1st 12 , 2nd 12 , 3rd 12ဟူပြီး(3)လိူင်းရှိပါသည်။
1st 12 လိူင်းမှာနံပါတ် 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 ဖြစ်ပါသည်။
2nd 12လိူင်းမှာနံပါတ် 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 ဖြစ်ပါသည်။
3rd 12မှာနံပါတ် 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36 ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်ပေါက်သည့်နံပါတ် "0" ဖြစ်ပါက တိုင်ဘက်နိုင်ပါမည်။လောင်းကြေးထည့်ထားသည့်အကွက်ထဲနံပါတ်ပေါက်ပါကလောင်းကြေး၏ 2ဆ ရပါမည်။
9. (BIG-SMALL) အနိမ့်အမြင့် အကွက်
ရိုးလက်၏ အနိမ့်-အမြင့်အကွက်မှာ နံပါတ်1မှ36ထိ နံပါတ်36ခုကိုရွေးပြီးလောင်းကြေးထည့်နိုင်ပါသည်။
အနိမ့်အကွက်ပါဝင်သည့်နံပါတ်မှာ 1 မှ 18ထိ
အမြင့်အကွက်ပါဝင်သည့်နံပါတ်မှာ 19 မှ36ထိ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်ပေါက်သည့်နံပါတ်သည် "0" ဖြစ်ပါကတိုင်ဘက်နိုင်ပါသည်။လောင်းကြေးထည့်ထားသည့်အကွက်ထဲနံပါတ်ပေါက်ပါကလောင်းကြေး၏ 1ဆ ရပါမည်။
10. (EVEN-ODD) စုံ-မ အကွက်
(36)ကွက်၏ စုံ-မအကွက်မှာ နံပါတ်1မှ36ထိ နံပါတ်36ခုကိုရွေးပြီးလောင်းကြေးထည့်နိုင်ပါသည်။
စုံအကွက်ပါဝင်သည့်နံပါတ်မှာ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 (18)လုံးရှိပါသည်။
မအကွက်ပါဝင်သည့်နံပါတ်မှာ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 (18)လုံး ရှိပါသည်။
11. (BLACK RED) အနီ-အမဲ ကွက်
(36)ကွက်၏ အနီ-အမဲကွက်မှာ နံပါတ်1မှ36ထိ နံပါတ်36ခုကိုရွေးပြီးလောင်းကြေးထည့်နိုင်ပါသည်။
အနီအကွက်ပါဝင်သည့်နံပါတ်မှာ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 (18)လုံးရှိပါသည်။
အမဲအကွက်ပါဝင်သည့်နံပါတ်မှာ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 (18)လုံးရှိပါသည်။
ABOUT US REGISTER PROMOTION
GAMES BACCARAT GRAGON TIGER ROULETTE FISHING SLOT
CONTACT LINE: @starbetmm	Hotline: +959964555666	Hotline: +959964555999